अमेरिकामा पुरुष या महिलाले कार्यस्थलका कुनै पनि चिज नसोधी घर किन ल्याउनु हुदैन ? - Enepalese.com
अमेरिकामा पुरुष या महिलाले कार्यस्थलका कुनै पनि चिज नसोधी घर किन ल्याउनु हुदैन ?
इनेप्लिज २०७६ असार २७ गते १:५७ मा प्रकाशित
डिसी । अमेरिका आउने ईच्छा गर्ने या नवआगन्तुकहरुलाई यो मूल मन्त्र निकै काम लाग्ने हुन्छ । नेपालबाट अमेरिका भर्खर आएकाहरुलाई यो कुराको ज्ञान हुदैन । कहिलेकाही मन लोभी भै दिन्छ । भर्खर आएका नव आगन्तुकहरु मात्र हैन २ – ४ बर्ष काम गरेका पनि यस्ता चिजमा लोभिन्छन ।
अनि कार्यस्थलमा रहेका केही चीज नेपाल जस्तै सम्झी उठाई घरमा ल्याउन मन पनि लाग्छ । र ,नेपालमा ल्याउने गरेको आदतले अमेरिकामा पनि लोभले गर्दा त्यसो गर्न मन लाग्छ ।
यस्ता घटना प्रसस्त घट्दछन । अमेरिका भर्खर आउनु भएको छ या आउने सुरमा हुनु हुन्छ भने यस्तो काम हामीले भूलबस नेपालमा गरेका छौ भने अमेरिकामा कहिले गर्नु हुदैन । मजाक मजाकमा पनि गर्नु हुदैन ।
कहिले पनि कार्यालयको कुनै पनि समानमा हात लगाउनु हुदैन । यस्तो कहिले बुद्धि नआओस । अमेरिकामा पुरुष या महिलाले कहिले लोभ गर्नु हुदैन । घर लाग्दा के हुन्छ भन्ने कहिले सोच्नु हुदैन ? यसको कारण र यस्ता लोभको कारण नेपालीहरुको जागिर धरापमा परेको छ । जागिरबाट हात धुनु परेको छ । जागिरबाट निस्कासित भएका छन् ।
अमेरिका पसे पछि र कानुनि रुपमा बस्ने कागजात भएता पनि नभएता पनि काम गर्ने स्थानका केही सामान छुनु हुदैन । कसैले देख्दैन । केही पनि हुदैन ? म पनि यहाँको कर्मचारी हु ,कसले के गर्छ भन्ने मनमा कहिले लिनु हुदैन ।
हात लामो पार्नु अर्थात् छलेर लाने कोसिस पनि गर्नु हुदैन । किनभने अमेरिकामा जहाँ पनि चित्रग्राहिणी (क्यामरा ) जडान भएको हुन्छ । यस्तो गर्ने बितिकै सुरक्षामा खटिएर रहेका र कर्मचारीले के बदमासी गर्छन भनेर आँखै नझिम्क्याई हेरी रहेका हुन्छन ।
छल्ने ,चोर्ने ,दाउ हेर्ने आखा छल्ने भन्ने अमेरिकामा सपनामा पनि नचिताए हुन्छ । बिरानो देशमा आएका हामीलाई यस्ताको परिणाम निकै नराम्रो हुन्छ । २-४ डलरको लोभको कारण सपना बोकेर अमेरिका पसेका हाम्रो सपना चकानाचुर हुन्छ ।
अमेरिकामा यसरी नसोधी ,अनुमति नमागी गोजीमा हाल्ने,झोलामा राख्ने ,पोको पार्ने ,शरीरका अन्य भागमा लुकाएर कटाउला भन्ने कदापी सोच्नु हुदैन । पाकिस्तानमा बसेको ओसामा बिन लादेनलाई त अमेरिकाले खोजेर सिध्याएको अमेरिकाले चाहेमा हरेक कुरा पत्ता लगाउन सक्दछ ।
हामी जसरी अमेरिका आएता पनि अमेरिकामा करौडौ कमाउन सकिन्छ । मस्तिष्कमा २-४ सय सम्म को लोभ नगरौ । हामी यस्तो कहिले गर्दैनौ । यसो गर्दा अमेरिकामा चोरीको आरोप लाग्दछ । अमेरिकामा सबै भन्दा महत्व ख्याती ( क्रेडिट) को हुने हुनाले एक पटक २-४ डलर या २-४ सयको लोभमा परेर कार्यस्थलका सामाग्री ल्याउन र छल्ने प्रयास गरेमा जीवनभर हामी चुक्ने छौ । हामीलाई दशा सुरु हुने छ ।
यस्ता काम कुनै पनि नेपालीले गर्नु न परोस । यस्तो सोच कहिले नआओस । अमेरिकामा पाइला टेके पछि अर्ब पनि कमाइन्छ । सानो चित्त नगरौ । यसैमा सबैको भलाई छ ।